Guddoomiye hore Siciid Xasan Shire: “Puntland wax hadda shaqeeyaa maba jiraanba, hay’adihii codbixinta iyo kuwii xisbiyada ma suurtagelin …” – Radio Daljir
Maarso 15, 2018 1:38 b 1
Guddoomiyihii hore ee Baarlammaanka Puntland, Md. Saciid Xassan Shire, oo ah khabiir dhanka siyaasadda, horayna uga soo midnoqday goleyaasha Baarlamaanka iyo xukuumadihii Soomaaliya ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey Radio Daljir waxa uu dawladda Soomaaliya ku boorriyey in ay si deggenaan ah u wajahdo xiisadda Berbera.
Md. Shire ayaa in kasta oo uu qiray inuu sharci yahay go’aanka ay Baarlammaanka Soomaaliya arrintan ka qaateen, haddana waxa uu sheegay in ay saameyn ballaaran yeelan doonto haddii uu xumaado xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadku, marka la eego saamaynta amni iyo tan dhaqaale ee imaaraadku ku leeyahay Soomaaliya, ayna tahay in arrintaas loo toog hayo.
Guddoomiye hore Saciid Xassan Shire oo kamid ah xubnaha u taagan xilka madaxtinimo ee PL ayaa dhanka kale sheegay in si xun loo turjumay hadal uu dhawaan sheegay oo la xiriiray doorashada PL, hadalkaas oo baryahanba si weyn loogu hadalhayey baraha bulshada.
Murashax Shire oo ku sugan magaalada Dhahar ayaa khadka telefoonka ugu warramay Axmed Sh. Max’ed “Tallman” oo ku sugan studiyeenna Daljir ee Bossaso.
Dhiig kar badanaa cisbitaalka iska ilaali Runtana sheeg xaq darana ka fogow sidaabaa horumar lagu GAARI karaa